I-Loopfuse: I-B2B Marketing Automation yama-SMB | Martech Zone
I-LoopFuse inikeza ibhizinisi ebhizinisini (B2B) yesikhulumi sokuzenzekelayo sokumaketha esikutshela ukuthi uvakashela iwebhusayithi yakho, sikusize uthwebule imininingwane yabo, sithumele ama-imeyili wokukhulisa abahola phambili, uthole amaphuzu amahle kakhulu, futhi sihlanganise konke ohlelweni lwakho lweCustomer Relationship Management (CRM) nge ukubika okuthuthukile.
Uma usendaweni, uzobona imikhondo efanelekile, imijikelezo yokuthengisa efinyeziwe, ukumaketha okukhuphukile nokusebenza kahle kokuthengisa, kanye nokuzenzakalela kwemisebenzi yezandla kanye nokuphindaphindwayo okukodwa. Ngamafuphi, sikusiza ukuthi ungenise imali ngokushesha. Ukubuka konke Izici zeLoopFuse OneView:
Amadeshibhodi Wokumaketha - Amadeshibhodi ahlinzeka ngombono wesikhathi sangempela, kuze kufike kumzuzu kuyo yonke imisebenzi yakho yokuThengisa nokuMaketha, kuze kube nemininingwane ecolisisiwe kuma-touchpoints anethemba, izinkampani, i-CRM Leads, kanye noxhumana nabo be-CRM. Kusuka Ekumakethweni Kwe-imeyili kuvulwa futhi kuchofozwe amanani, kuye kwinani labaHoli abenziwe ngehora ngaphakathi kweCRM yakho, amadeshibhodi abo anakho konke.
imeyili Marketing - Amandla wokuMaketha we-imeyili ahlanganisiwe we-OneView akuvumela ukuthi wakhe imikhankaso ye-imeyili ebukekayo, eyenziwe yaba ngeyakho ngemininingwane yokuxhumana nomamukeli. Inamandla analytics nokubika kukusiza ukuthi uhlele kahle imikhankaso yakho ye-imeyili eqhubekayo.
Marketing kwangaphakathi - Hlaziya futhi ulandelele izinjini zokusesha, amagama angukhiye, izingosi ezibhekiswe kuwo kanye nethrafikhi eqondile efinyelela kusayithi lakho. Thola ukuthi imaphi amakhasi wokumaketha nokuqukethwe abaluleke kakhulu kubavakashi nakubafundi besayithi lakho.
Ukuthwebula ukuhola - I-Marketing Automation iqala nge-Lead. Amafomu Wokuthwebula Wokuhola ahlanganiswe ngaphandle komthungo namafomu akho wamanje wewebhusayithi, akuvumela ukuthi uguqule inqubo yokuthwebula, yokufaka i-funneling (ku-CRM yakho), nemikhombandlela efanelekayo.
Ukuhola Ukuhola - Lead Nurturing automates ngokuphelele inqubo yokufaneleka kwamathuba kuHola noma ukugcina ukunakwa kwamakhasimende akho akhona. Imodyuli ye-OneView's Lead Nurturing module ikwazi ukuhlaziya yonke iphoyinti lokuthinta ngethemba elithile; umsebenzi wewebhusayithi, imininingwane yokuxhumana, umsebenzi we-imeyili, kanye nokuhlanganiswa kwesikhathi sangempela neCRM yakho.
Ukuhlanganiswa kweCRM - Ukuhlanganiswa kwe-Bi-directional ne-CRM yakho kuhlinzeka ngenqubo ezenzakalelayo yokuthwebula, efanelekayo, yokuguqula, neyokulinganisa ukuhola, oxhumana nabo namathuba. Ama-plugins angeziwe akhulisa ukuhlanganiswa kwawo kwe-CRM, enikeza abasebenzi bokuthengisa imininingwane yesikhathi sangempela kuwo wonke ama-Lead.
Amaphuzu okuhola - I-LoopFuse OneView ivumela abathengisi ukuthi bakhe ngokushesha imithetho yokuhola amagoli ngokusebenzisa amandla abathwebuli bokuhola phambili. Akukho ukufaka amakhodi okuyinkimbinkimbi, noma okunzima ukuthola i-syntax, ngakho-ke abathengisi bangangena futhi bagcine imithetho ngokushesha.
Ukuphathwa koPhambili - Ngokulandela yonke imisebenzi yezivakashi nokufaka imininingwane eyodwa ekubhaliseni, sinika abathengisi amandla okuhlukanisa izingxenye eziholela emaqenjini ahlukene anezakhiwo ezifanayo noma amaphrofayili womsebenzi. Ngezinhlelo ezizenzakalelayo, izinhlangano zingaphatha kangcono izimpendulo ezivela kumathemba ngenkathi ngasikhathi sinye zigxila ekuthengisweni kwabathengi.
Imibiko Yokumaketha - Imibiko ejulile edizayinelwe ukusiza abakhangisi ekusunguleni ukuqonda okusebenzayo kuzindlela zabo zokuhola, zokubamba kanye neziqu. Imodyuli yokubika ihlanganisa zonke izici zokumaketha kudatha yakho yonke, kufaka phakathi: amathemba, iwebhusayithi analytics, izinkampani ezivakashelayo, ukusebenza kwe-imeyili, nemisebenzi ye-CRM.
Ukumaketha Komphakathi - Imithombo yezokuxhumana iyindlela enhle yokukhomba nokuxhumana namathemba. Ingxenye ekhohlisayo ukwahlukanisa isignali nomsindo ukuze uthole amathuba amahle kakhulu. I-Nearstream yintsha futhi ikusiza ekutholeni amasiginali wokuthenga.
Ukuhlanganiswa Kwenkampani Yesithathu - ILoopFuse OneView ihlangana ngaphandle komthungo nezinhlelo ezidumile zokuphathwa kokuqukethwe, amadeski osizo, ama-CRM, nezinkomba zebhizinisi ezivela eceleni, ukubala nje ezimbalwa.
I-OneView API - ILoopFuse inikeza i-Webservice API ukubuyisa nokufaka imininingwane ku / kusuka ku-akhawunti yakho ye-LoopFuse OneView ngokuhlelekile. Njengoba i-User-Interface yethu yonke yakhelwe kwi-Webservice API yethu, ukusebenza okuningi okutholakala ngaphakathi komsebenzisi-isikhombimsebenzisi kuyatholakala kuwe ukuze uxhumane nakho.
Tags: Apiukuhlanganiswa kwe-crmDrupalimeyili Marketingmarketing kwangaphakathiukuhola phambiliumphathi wokuholaukuhola ukukhulisaukuhola amagoliumabhebhanaloopfuse ukubuka kuqalaplatform yokumaketha yokuzenzekelayoukumaketha amadeshiimibiko yezokumakethaukubukwa okukodwasalesforceukumaketha komphakathiWordPresszendesk